Salaadda San Martín de Porres. ? Xoolaha iyo Xanuunada.
Ducada Saint Martin ee Porres, waa hub awood badan ku leh gacmaha dadka ilaalinaysa iimaan adag oo caafimaad leh. The duco San Martin de Porres Waxay ka dhigan tahay badbaadada xaalado caafimaad oo badan iyo ku lug yeelashada dadka midabka leh.
Intii uu noolaa, waxay waxtar u lahayd kuwa isbitaallada la dhigay dhibaatooyin caafimaad oo culus.
San Martín de Porres waa muqadas caan ka ah Koonfurta Ameerika sababtuna tahay mucjisooyinka badan ee loosoo qaatay muddo dheer kahor intaan la garaacin.
1 Salaadda Saint Martin de Porres Waa kuma Saint Martin de Porres?
2 U ducee San Martín de Porres xoolaha
3 Salaadda San Martín de Porres oo loogu talagalay dadka buka
3.1 Goormaan tukanayaa?
Salaadda Saint Martin de Porres Waa kuma Saint Martin de Porres?
Wuxuu ku dhashay Lima, Peru sanadkii 1579, waa curadka labada walaal, aabihiis Peruvian iyo hooyadiis haweeney harag midabkeedu ku dhashay Panama.
Markii uusan aqbalin qoyskiisa aabihiis, waxaa lagu haystay Doña Isabel García, oo ku noolaa San Lázaro, oo ah magaalo ay ku nool yihiin dad midabeysan.
Markii uu yaraa wuxuu bilaabay inuu tababaro sida macaaneeye wuxuuna halkaas ka bilaabay waxbarashadiisa weyn dunida Ee daawada.
Wuxuu bilaabay diyaarintiisa diiniga ah in the Dominican convent our Marwada Rosary laakiin si weyn ayaa loo diiday sababtoo ah codka mulatto ee midabka maqaarkiisa.
Si kastaba ha noqotee, Martin wuxuu ku adkeystay dhaqankiisa, wuxuu salaadda hore ka qeybgalay salaadda mana iloobin waxqabadyadiisa, isagoo tusaale u noqday dadka kale.
Hadiyaddiisa ah bogsashada ayaa lagu arkay bini-aadamka iyo xayawaanada, dhamaan bukaannadii Martin daaweeyey waxay heleen bogsasho, xaalado badan, markiiba.
Tani waxay ku kasbatay caan iyo durba Bukaanku wuxuu doonayey inuu daryeelo.
Waxaa la sheegay, marka laga reebo hadiyadda bogsashada, qaar kale ayaa la siiyay isaga, sida hadiyadda afafka iyo xitaa hadiyadda duulista.
U ducee San Martín de Porres xoolaha
Waad mahadsan tahay, Ilaaha Qaadirka ah, oo Abuuraha uumay uun nool.
Maalintii shanaad iyo lixaad ee abuuritaanka, Waxaad ku abuurtay kalluunka badaha, shimbiraha hawada iyo dugaagga dhulka jooga.
Waxaad ku dhiirrigelisay San Martín de Porres inuu u tixgeliyo xayawaannada oo dhan inay yihiin walaalohood. Waxaan kaa codsanaynaa inaad ku ducayso xayawaankan.
Awoodda jacaylkaaga u oggolow in xayawaanku u noolaado sidaad doonayso.
Had iyo jeer waxaa lagu ammaanayaa dhammaan quruxda abuurkaaga. Ilaaha Qaadirka ahow, waad ku mahadsan tahay binu-aadmiga oo dhan,
U soo ducee Saint Martin de Porres ducada xoolaha leh iimaan.
Weydiiso caafimaadka xayawaankeena waa ficil jacayl taas oo dad badani u haystaan ​​inay tahay wakhti lumis.
Xayawaannadayada iyo kuwa ku sugan dariiqyada, ayadoon loo eegayn nooceeda ama xayawaankooda, mid kastaa wuxuu leeyahay caawiye San Martín de Porres oo siin kara caafimaad si ay nolol caafimaad u helaan.
Salaadda San Martín de Porres oo loogu talagalay dadka buka
Gacaliye San Martin de Porres.
Iftiinka kuwa is-hoosaysiiya, oo quduus ah oo iimaan weyn leh, inaad adigu ilaahay ku siiyo inuu sameeyo yaabab aan la malayn karin, ayaan maanta kuugu imid baahidaas iyo murug iga cidhiidhisay.
Noqo ilaaliyehayga iyo dhakhtarkayga, shafeecahayga iyo macalinkeyga jidka jacaylka Masiixa.
Kuwiinad jeceshahay Ilaah iyo walaalihiin, had iyo goorba waad ku daali jirteen inaad caawisaan kuwa baahan, aad iyo aad bay u ogtahay in ilaahay kugu siiyey awood aad isku wakhti ku ahaato meelo kala duwan, dhagayso kuwa jecel wanaaggaaga, jacaylka Masiixa.
Waxaan aaminsanahay iskaashigaaga xoogga leh ee aad la leedahay Ilaah sidaa daraadeed, anigoo Rabbiga hortiisa ka baryaya, in naftayda daahir ah oo kula mid ahi ay wanaagga oo dhan yihiin, in dembiyadayda la iga cafiyi doono oo aan ka madax-banaanaan doono xumaanta iyo xumaanta.
Ii soo celi ruuxdaada sadaqadda iyo adeegga si aan si kalgacal leh kuugu adeego oo aad gacangeliso walaalahaaga oo aan wanaag sameeyo.
Wixii aan ku ogaadey adiga oo kale, sida, wanaagga dadka kale u sameeyo, murugadaydu waa mid i qancinaysa.
Tusaalahaaga is-hoosaysiinta leh ee lahaanshaha naftaada, had iyo jeer meesha ugu dambeysa, ii noqo iftiin si aanan waligey iloobin inaan is-hoosaysiin.
Xusuusnow iimaankaaga weyn, oo awood u leh bogsashada, dib u soo nooleynta, iyo qabashada cajaa'ibyo fara badan, ii noqo daqiiqaddo shaki leh, nimco waarta oo qalbigayga ku buuxisa dabka jacaylka shuruud la'aanta ah ee Masiixa.
Aabaha jannada, waxaan ugu mahadnaqayaa addoonkaaga aaminka ah ee Martin Martin, i caawi dhibaatooyinka aan ku jiro oo ha u oggolaan rajadaydu inay jahwareerin.
Sayidow Ciise Masiix, kan yidhi "weydiiso waadna heli doontaa", waxaan si qiiro leh kaaga baryayaa inaad, ducada Saint Martin de Porres, aad maqashid codsigan.
Jacayl baan kaa baryayaa, i sii nimcada aan waydiisto haddii ay tahay mid u wanaagsan naftayda.
Tan waxaan ku weyddiisanayaa Ciise Masiix, Rabbigeenna ah.
Salaaddan Saint Martin de Porres ee buka waa mucjiso!
Had iyo jeer u gudub cudur Waa mid ka mid ah geeddi-socodka ugu adag ee ay wax kasta oo nool u dhacaan, bini-aadamka waxay la mid tahay dhimashada tan iyo cuduro badan oo dawo ah oo cilmiyaysan ma leh.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hub xoog badan oo iimaan leh oo ka shaqeeya salaadda.
Waad waydiin kartaa inaad bogsiiso cudur kasta waqti kasta, quduusiinta iyo gaar ahaan San Martín de Porres waxay diyaar u yihiin inay naga caawiyaan oo ay nasiiyaan bogsashada jirkeena ama xubin reerka ah ama saaxiib ah oo u baahan mucjisada.
Salaada waa la sameyn karaa waqti walba iyadoon loo eegeynin meesha iyo xaalada.
Dadka qaarkiis waxay sameystaan ​​meeraha qoyska halkaasoo ay ku dukadaan salaadda subaxa iyo maalinta oo dhan, qoysaska wada tukada ayaa doorbida inay sameyaan inta lagu jiro quraacda, sidaas darteed hubinta maalin barakaysan oo la ilaaliyo.
Jumlado samee faneedyo ama tukasho El rosario dhammeystiran San Martín de Porres waxay noqon kartaa farqiga si aan u aragno mucjiso nolosheena.
Laakiin waxaas oo dhan waa in lagu sameeyaa isagoo rumeysan inuu dhagaysan doono inuu na dhageysto mar walba, haddii kalese waxaan waqti u lumin doonaa maadaama salaadda aysan xitaa gaari doonin saqafka guriga.
Waa hub xoog badan laakiin ogsoonaanta sida loo istcimaalo iyo wixii ka sarreeyaba, markasta oo aan xasuusto inaan uga mahadcelino mucjisooyinka uu ina siiyay.
Waxaan rajeynayaa inaad ka hesho caawinta aad ugu baahan tahay ducada San Martin de Porres.
Ducada adag ee San Alejo
Salaadda ilaa Mikaa'iil oo ah Mikaa'iil